Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Nekuputika kwazvino kwecoronavirus (Covid-19) kukanda wose urongwa kufamba mu rakati nyangarara, zvingava zvakaoma kuziva kana uchifanira kuchengeta zororo renyu panguva coronavirus kana kwete. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Kufamba ndiyo yekupedzisira ushingi asi iwe unofanirwa kuzviita isina mukwende, kunyanya layovers kana kana iwe chete kuva akasununguka zuva muna rimwe remaguta Germany yakakurumbira. Tine ruzivo rwese rwaunoda kwenzvimbo dzekuruboshwe dzemitoro kuGerman kune zvitatu zvacho…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Pane zvakawanda kwazvo norudo pamusoro Paris. Ndokupi kwaunofunga kunyange kutanga, rudyi? The changouya mumusoro iri nzvimbo huru wakafanana Eiffel Tower uye Louvre. Asi wadii uyewo kuona matombo anokosha akavanzwa muguta? Ngatitangei…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Milan kuRoma By Train kana kuRoma kuti kuMilan chiri nyore uye akarongeka ruzivo. Tisingatauri yakanaka! Iwe unogona kutora chitima chakachipa chinogona kutora nguva yakareba kupfuura 3 Maawa asi izvo Zvitima kubva kuMilan kuenda kuRome zvinokutendera kuti usvetuke kubva…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Europe azere mamwe Most Beautiful Streets. Kubva zvikuru kwezvokufuka uye mavara kune kujairika. Vamwe Most Beautiful Streets In Europe vakatobatana yakawanikwa uye tsime yakasimbiswa pamusoro nzvimbo njanji asi vamwe vari chaiye zvakavanzika zvinokosha kuti chete…
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Scotland, ...